Qodobka 81aad(2) ee Dastuurka KMG
Sharciyada qabyada ah waxaa Golaha Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah u soo bandhigi kara:
(a) Ugu yaraan hal wakiil oo ka socda Dowladaha Xubinta ka ah Federaalka; ama
(b) Guddi kasta oo ka mid ah Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah.
1. Arrin walba oo u baahan codka Golaha waa in loo soo bandhigaa qaab soojeedin.
2. Soojedinadu waxay u qaybsamaan, soojeedin Habraac iyo soojeedin Nuxur.
3. Soojedintu waxay noqon kartaa mid khusaysa Habraaca Golaha isla markana soo jeedintedu aysan u baahnayn wax wargelin ah. Waxaana ka mid ah
b) Soojedin in fadhiga dib loo dhigo malinta xigta.
t) Soojedin in dooda dib loo dhigo malinta xigta.
j) Soojedin dhexgal toosineed ayadoo dood socota.
x) Soojeedin in la xiro dooda lana codeeyo.
Kh) Soojeedin in la xaqiijiyo Guntanka.
d) Soojeedin in qodob/ qodobo xeer-hoosaadka aan lagu dhaqmin ( la laalo) si ku meelgaar ah inta lagu guda jiro arin ama dood.
4. Soojeedintu waxay noqon kartaa mid Nuxur una baahan in Golaha la soo wargeliyo inta aan la soo jeedin.
b) Soojeedin hindise sharciyeed ama qaraar
t) Soojeedin wax ka bedel hindise sharciyeed ama qaraar
j) Soojeedin heshiis caalami
x) Soojeedin wax ka bedelid dastuurka
kh) Soojeedin wax ka bedelid xeer-hoosaadka
d) Soojeedin eedayn madaxwayne
r) Soojeedin kalsoni kala noqosho ra’isalwasaaraha
5. Soojedinta Nuxur waxaa soojedin kara
b) Golaha Wasiirrada
t) Senatorka Golaha haddii usan Xeer-Hoosadka si kale u qeexin.
6. Soojedinta Nuxur waa in ay ahaataa mid qoraal ah loona gudbiyaa Guddomiya Aqalka Sare ka hor 24 saacadood inta aan fadhiga Golaha la keenin.
7. Guddomiya Golaha waa in usan aqbalin soojedin ka hor imanaysa Shareecada islamka, Dastuurka, ama Xeer-Hoosaadka Golaha iyo shuruucda kale ee dalka.
8. Inta aan la furin dooda soojedinta , qof ka tirsan soo jediyayaasha soojedinta ayaa golaha u akhrinya ujeedoyinka soojedinta.
9. Goluhu waa in uusan u gudbin Soojeedin Nuxur asagoo aan dhamayn soojedin Nuxur oo horey Golaha loogu soo gudbiyay.
10. Inta lagu guda jiro dooda, soojeedinta Habraaca aya mudnaanta ka leh soojedinta Nuxur.
(1) Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalku waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo kaqaybgal buuxa siinaya xubnihiisa.
(4) Sharci qabyo ah oo Goluhu diiday dib looguma soo celin karo Golaha ilaa ay ka soo wareegato
soddon (30) maalmood maalinta Goluhu diiday.
dhegeysiga dadweynaha iyada oo maanka lagu hayo mabaadi’da guud ee daahfurnaanta
Qodobka 29-aad: Habka dooda iyo anshaxa xubnaha golaha:
1.Xubin walba oo golaha ka tirsan wuxuu xaq u leeyahay in si xor ah u cabiro Lana xurmeeyo ra’yigiisa marka Golaha laga dhex doodayo.
2.Iyadoo la fulinaayo faqradda kor ku xusan, xubnaha Golaha waa in ay si hagaagsan ugu dhaqmaan qodobada so socda:-
a)Xubin kasta waxaa laga doonayaa in ay fekerkeeda u cabirto si kooban oo cad iyadoon ka baxayn qodobka laga hadlayo, laguna celcelin ereyo isku mid ah, ilaalinaysana waqtiga la siiyay.
b)Xubin walba Waxaa waajib ku ah in ay run ka sheegto qodobka ay ka hadlayso.
c)Waxaa waajib ku ah xubin kasta in uusan hadalkeedu xiisad kicineyn, khalkhalna gelineyn wadanka, shacabka iyo Golaha intaba.
d)Xubin kasta waa in ay ilaalisaa Haybada iyo sharafta Aqalka, xasaanada xubnaha iyo ha’adaha kale.
3.Soojeedinta xubin walba waa in ay ku salaysan tahay mabaadiida iyo fikradaha uu tageeraayo ama kaga hor imaanaayo, iyadoo la dhawraayo xubnaha kale.
4.Xubinta cabiraysa fekerkeeda laguma samayn karo dhexgal, gunuunuc, qaylo, sacabin, foori iyo wixii kale ee dhaqan xumo ah.
5.Xubina ma hor keeni karto Golaha ra’yi aan waafaqsanayn ajendada kulan maalmeedkaas horyaal, hadaanu ogolaan Guddomiyuhu.
6.Xubina Kama bixi karto fadhiga, ka dib markii ay jeediso ra’yigeeda, fasax la’aan.
7.Xubina kuma qaybin karto kulanka gudihiisa hadal qoraal aanu fasaxin gudoomiyuhu.
8.Waxaa ka reeban xubnaha in ay qalalaaso ku sameeyaan Golaha iyo agagaarkiisa toonna.
9.Waxaa reeban in xubnuhu u tanaagoodaan ama u il jebiyaan martida golaha fadhida.
10.Waxaa reeban in laga baxo fadhiga marka Guddomiyuhu hadlayo ama ay socoto cod bixin.
11.Waxaa reeban in lala yimaado, calaamado, qoraalo, Hal ku dhigyo iyo dhawaaq muujinaya is hortaag howlaha golaha.
12.Xiliga uu hoogaaminayo guddomiyuhu shirka looma tegi karo waxna looma sheegi karo, xoghaynta ayaa wixii qoraal ah loo marinayaa.
13.Xubintii rabta in ay hadal jeediso waxay raacaysaa talaabooyinkan:
B)xubin walba waxay ku bilaabaysaa hadalkeeda” Mahadsanid Guddomiye”
T)Waxay isticmaalaysaa “Senator” marka ay tilmaamayso xubin kale, ama Mudane/Marwo marka ay sheegayso qof kale oo madaxda ka mid ah.
1.Xubintii rabta in ay hadasho waxay taageysaa gacanta iyadoo aan qaylin, kicin ama ficil kale sameyn.
2.Xubina ma hadli karto, calaamadna kuma muujin karto Ra’yigeeda haduusan Guddomiyuhu u ogolaan.
3.Xubintii hadasha ayadoon guddomiyuhu u ogolaan wuu ka joojinayaa hadalka, wuxuuna hadalka siinayaa cidii ku xigtay.
Qodobka 74aad: Kalfadhiyada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka
Qodobka 25-aad: Ajendaha
1. Guddiga Joogtada ah ee Goluhu wuxuu diyaariyaa ajendaha fadhiyada soo socda ee Golaha. Ajendaha waxaa loo qeybinayaa Xubanaha Golaha ugu yaraan 12 saacadood ka hor fadhiga loo dhan yahay.
2. Ajendaha kulan walba waxaa lagu ansixinayaa cod gacan taag ah, haddii aysan ugu yaraan 5 xubnood bilowga fadhiga u gudbin guddoomiyaha golaha soo jeedin qoraal ah oo wax lagaga bedelayo ajendaha iyagoo soo jeedinayo arrin deg-deg ah. Soo jeedintuna waa in ay ku saxiixan yihiin xubnaha taageeraya.
3. Ajendaha haddii ay codsadaan ugu yaraan 5 xubnood in wax cusub lagu daro ama wax laga beddelo waxaa gudoonka laga doonayaa in uu ku daro ajendaha isla fadhigaas hadii ay u codeeyaan (50% + 1) ee tirada golaha fadhida.
Xogta Xildhibaanadii Hore